Xiddigii Bartilmaameedka u ahaa Man United ee Eduardo Camavinga oo ku biiraya Kooxda Real Madrid – Gool FM
Xiddigii Bartilmaameedka u ahaa Man United ee Eduardo Camavinga oo ku biiraya Kooxda Real Madrid
Ahmed Nur August 31, 2021
(Madrid) 31 Agoosto 2021. Ciyaaryahankii bartilmaameedka u ahaa Manchester United ee Eduardo Camavinga ayaa la soo warinayaa inuu ku biiri doono Real Madrid, kaddib markii ay Rennes aqbashay dalabkii Los Blancos.
Eduardo Camavinga ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu maanta oo ah maalinta ugu dambeysa suuqa kala iibsiga u dhaqaaqo Real Madrid, kaddib markii kooxda ka dheesha Horyaalka La Liga ay Rennes ka aqbashay dalab ku kacayey 27 milyan oo gini oo lagu daray gunnooyinka.
Camavinga, kaasoo sidoo kale ay xiiseynayeen Kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain isla markaana uu heshiiskiisu ku ekaa dhammaadka xilli ciyaareedkan ayaa tartankii loogu jiray saxiixa 18-sano jirkaan waxaa haatan ku guuleysatay Real Madrid.
Sida uu warinayo Suxufiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano, Camavinga ayaa tijaabada caafimaad u maray kooxda reer Spain xalay, waxaana uu Red Devils ka doortay Real Madrid.
Laacibkan da’da yar ee khadka dhexe ayaa isagoo 16-sano jir ah kulankiisii ugu horreeyey u saftay kooxda koowaad ee Rennes.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda Real Madrid ayaa saxiixa Camavinga waxa ay ku samirsiinaysaa Taageerayaasheeda kaddib markii ay ku guuldarreysteen inay la soo wareegaan Kylian Mbappe oo ay dul dhigeen dalab ku kacayay 200 milyan oo euro, balse ay soo diiday PSG.
Cristiano Ronaldo oo lagu wareejinayo lambarka 7-aad & Kooxda Man United oo Edinson Cavani ku wargelisay
Arsenal oo xaqiijisay bixitaanka Willian… (Kooxdee ayuu ku biiri doonaa xiddiga reer Brazil?)